Soomaali / Soomaali
Barnaamijyada Waxbarashada Xagaaga ee Saint Paul Public Schools (SPPS)
Warkii u Dambeeyay ee Barnaamijyada Waxbarashada Xagaaga
Fadlan ogow in iskoollada barnaamijyada xagaaga ay qaarkood isu beddeleen dhismooyin leh qaboojiye.
Goobo la Beddelay:
Fasallada K-4 ee iskoolka Mississippi waxay ardaydu Waxbarashada Xagaaga u aadayaan iskoolka Riverview (160 Isabel Street East)
Fasallada K-4 ee iskoolka Nokomis South waxay ardaydu Waxbarashada Xagaaga u aadayaan iskoolka Global Arts Plus Lower Campus (1023 Osceola Ave)
Fasallada K-4 ee iskoolka Maxfield Power Scholars waxay ardaydu Waxbarashada Xagaaga u aadayaan iskoolka Highland Park Elementary (1700 W Saunders Ave)
Fasallada 9-12 ee iskoolka LEAP ee Soo Kabidda Dhibcaha Maqan iyo Barnaamijka Horumarinta Luuqadda (EL) waxay ardaydu Waxbarashada Xagaaga u aadayaan iskoolka Creative Arts Secondary School (65 E Kellogg Blvd)
Degmada Saint Paul Public Schools (SPPS) waxay ardayda dhigata fasallada K-12 siisaa Barnaamijyada Waxbarashada Xagaaga. Ardaydu waxay heli doonaan fursado ay ku bartaan waxyaalo cusub iyagoona xoojinayo xirfadaha tacliineed ee hadda jira; inay u diyaargaroobaan sannad-dugsiyeedka soo socdo iyada oo loo marayo hawlo waxbarasho oo firfircoon kuwaasoo leh madaddaalo iyo tijaabin; iyo inay horumar ka gaaraan dhanka qalinjebinta. Dhammaan barnaamijyadu waa BILAASH.
Barnaamijyada Waxbarashada Xagaaga ee SPPS waxaa ka mid ah:
Ardayda waxaa lagu dhiirrigelin doonaa inay bartaan xirfado cusub iyagoo kobcinayana fahamka akhriska, xisaabta iyo maaddooyinka kale.
Quraac iyo Qado
Dhammaan ardayda waxay helayaan laba cunto oo saxo fiican leh, ahna bilaash maalin kasta kuwaas oo ay ka mid yihiin cuntadii weyneyd, saladhyada, waxyaabaha la dubay, iyo miraha iyo khudaarta laga soo gooyay beeraha deegaanka.
Gaadiid ayaa loo heli karaa ardayda badankood ee ku nool Saint Paul (kuwaasoo lagu caddeeyay tilmaamaha gaadiidka). Isticmaal aaladda Raadiyaha Dugsiga (school finder) ee spps.org/apply si aad u heshid Aaggaaga (A-F1/F2).
Sida la isu Diiwaangeliyo
Qoysasku waa inay diiwaangeliyaan ardayda ugu dambeyn Jimco, April 16, si ay u helaan fursadda ugu fiican ee lagu galo barnaamijkooda ah xulashada koowaad iyo in la hubiyo in gaadiid la heli karo maalinta ugu horreysa ee barnaamijka.
Ardaygaaga heerka fasal ee uu hadda yahay inta lagu guda jiro sannad-dugsiyeedka 2020-21 ayuu noqon doonaa fasalka loo qoondeeyay inuu qaato inta ay socdaan Barnaamijyada Waxarashada Xagaaga.
Tusaale ahaan, haddii ardaygaagu yahay hadda fasalka kindergarten, waxay ka qeyb qaadan karaan barnaamijka waxbarashada xagaaga ee K-4.
Haddii ardaygaagu galayo kindergarten deyrta 2021, xaq uma lahan inuu galo Barnaamijka Waxbarashada Xagaaga ee K-4.
Ardayda SPPS ee Hadda Dhigato K-8
Qoysasku waxay dooran karaan HAL nooc keliya oo ah Barnaamijka Waxbarashada Xagaaga. Tixgeli barnaamijyada xiisaha u leh ardaygaaga. Gaadiid ayaa loo heli karaa ardayda badankood ee ku nool Saint Paul (kuwaasoo lagu caddeeyay tilmaamaha gaadiidka). Isticmaal aaladda Raadiso Dugsiga (school finder) ee spps.org/apply si aad u heshid Aaggaaga (A-F1/F2).
Iska diiwaangeli khadka online-ka: Qoysasku waa inay adeegsadaan magacooda iyo ereyada sirta ah ee lagu galo OneStop si ay u galaan Campus Parent. Markaad gashid Campus Parent, xulo “Diiwaangelinta Xagaaga (K-8).” Si aad u soo ceshatid ama aad mar kale u sameysatid eraygaaga sirta ah, booqo spps.org/onestop.
Arjiyada codsiga sidoo kale waa la daabacan karaa, waxaana lagu soo celin karaa boostada ama qof ahaan ayaa loo keeni karaa:
Haddii aad iska diiwaangelisid khadka online-ka ah, uma baahnid inaad buuxisid codsi warqad ah.
Ardayda SPPS ee Hadda Dhigato 9-12
Ardayda dhigato fasallada 9-12 waxay la-taliyayaashooda iskoolka la kaashanayaan inay isdiiwaangeliyaan, waxayna aadi karaan in ka badan hal Xilli oo Xagaag ah (Summer Session).
Ardayda aan Dhigan Iskoollada SPPS (dhammaan fasallada)
Ardayda aan dhigan iskoollada SPPS ee fasallada K-12: Soo dejiso arjiga, buuxi kuna soo dir arjiga boostada ama qof ahaan u keen cinwaankan: Summer Registration, Student Placement Center, Saint Paul Public Schools, 2102 University Ave. W., Saint Paul, MN 55114.
Foom diiwaangelin ah waa in loo diraa arday kasta oo soo xaadiraya.
Ardayda aan dhigan SPPS ee ku jirto fasallada 9-12: Ardaydu waa inay la-taliyahooda iskoolka ka soo caddeeyaan koorsooyinka isla markaana ay saxeexaan warqadda foomka isdiiwaangelinta.
Barnaamijyada Waxbarashada Xagaaga ee tilmaamahan ku qoran si dhakhso leh ayey u buuxsamaan. Haddii aan helno codsi isdiiwaangelin oo ka badan kuraasta la heli karo, ardayda waxaa lagu qori doonaa liiska sugitaanka. Qoysaska waxaa la siin doonaa barnaamij isdiiwaangelin oo iyaga loo heli karo haddii dookhooda koowaad uu buuxo.
Qoysaska isdiiwaangeliyo taariikhda kama dambeysta ah ee 16ka April oo mudnaanta leh waxay aakhirka bisha April heli doonaan kaarka boostada oo u sheegi doono in la qoray. Dhammaan qoysaska isdiiwaangaliyay waxay heli doonaan kaarka boostada oo ay la socoto xogta gaadiidka iyo iskoolka la aadayo qiyaastii laba toddobaad ka hor billowga Barnaamijka Waxbarashada Xagaaga.
Gaadiidka Baska ee Iskoolka
Isticmaal aaladda Raadiso Dugsiga (school finder) ee spps.org/apply si aad u heshid Aaggaaga.
Gaadiid ayaa loo heli karaa ardayda ku nool Saint Paul kuwaasoo uu gurigooda ama cinwaankooda kale uu ku dhex yaallo aagga barnaamijka loogu talagalay. Ardayda u qalanto gaadiidka waxay heli doonaan baska haddii ay ku jiraan:
Fasallada K ilaa 5 iyo haddii ay ku nool yihiin in ka badan nus-mayl iskoolka Barnaamijka Waxbrashada Xagaaga.
Fasallada 6-12 iyo haddii ay ku nool yihiin in ka badan meel hal mayl u jirto iskoolka Barnaamijka Waxbarashada Xagaaga.
Ardayda waa laga soo qaadi karaa lana dejin karaa cinwaanno kale (sida xarunta caruur-heynta) haddii ay ku yaalliin isla Aagga.
FIIRO GAAR AH: Qoysaska aan u-qalmin gaadiidka baska ee iskoolka waa inay u daabulaan ardaydooda kana soo qaadaan iskoollada Barnaamijka Waxbarashada Xagaaga. Ka wac Waaxda Gaadiidka 651-696-9600 haddii aadan hubin in ardaygaagu u qalmo gaadiidka baska.
Barnaamijyada Waxbarashada Xagaaga ee Fasallada K-4
Xilliga Xagaaga iyo Fasallada K-4
Ardaydu waxay ku kordhin doonaan sannad-dugsiyeedkooda waxbarashada iyagoo adeegsanaya hawlo leh firfircooni, madaddaalo, iyo waayo-aragnimo gacmeed. Barnaamijka waxaa ku jira waxqabadyo ku saabsan xisaabta, kombiyuutarka, koox yar oo akhriska isla barto, casharro ah jimicsiga, dhaqaalaha, caafimaadka, farshaxanka, iyo barashada dhirta iyo xayawaanka Minnesota Wadashaqeynta bulshada ayaa gacan ka geysata sidii loo taageeri lahaa helitaanka hibooyin cusub, xirfado iyo waxay caruurtu xiisayso.
Taariikhda Barnaamijka: June 21-July 29 (ma jiro barnaamij Isniinta, July 5)
Saacadaha: Waxay ku kala duwan yihiin iskool ahaan
Ardayda waxaa lagu qorayaa iskool kaasoo ku saleysan cinwaanka gurigooda (ama cinwaankii kale ee ay noo sheegeen). Isticmaal aaladda Raadiso Dugsiga (school finder) ee spps.org/apply si aad u heshid Aaggaaga (A-F1/F2).
Barnaamijka Barashada Luuqadda ee Fasallada K-4
Waxaa heli kara ardayda hadda ku qoran barnaamijka barashada luuqadda ee SPPS ama barnaamijyada labada-luuqadood (Isbaanishka, Faransiiska, Hmong iyo Mandarin). Ardaydu waxay helayaan duruus ah barnaamijkooda luuqadeed ee sannad-dugsiyeedka iyo af-Ingiriisiga, oo ay weheliyaan casharro la xiriiro dhaqanka iyo waxyaabaha la qabto xagaaga.
Goobta: Adams Spanish Immersion, 615 Chatsworth St., Saint Paul
Saacadaha: 7:30 subaxnimo -1: 30 pm
Aagga Gaadiidka: Aagga A-F1/F2
Dhaqamada Adduunka iyo Ciyaaraha Isboortiga ee Fasallada K-4
Kaqeybgalinta Dhallinta Iyadoo loo marayo Aqoonta & Isboortiga
Ardaydu waxay wax ka bartaan dhaqamada adduunka oo dhan waxayna ka qeyb qaataan hawlaha jimicsiga maalinlaha ah. Mawduucyada caddaaladda bulshada iyo dhaqan celinta waxay dhisaan xirfado ah dhanka hoggaamiyennimo iyo shucuur bulsheed.
Taariikhaha Barnaamijka: July 19-August 12
Goobta: Humboldt High School, 30 Baker St. E., Saint Paul
Grades K-4 Power Scholars Academy
Barnaamijka xagaaga ee Power Scholars Academy wuxuu isku daraa barashada tacliinta oo leh madaddaalo, waxqabadyo kobcin oo gacan-qabasho ah, safarro gaaban oo waxbarasho iyo mashaariic adeeg ah. Barnaamijka waxaa loogu talagalay inuu ka caawiyo ardayda inay helaan xirfado cusub oo tacliimeed ayna u diyaargaroobaan inay ku noqdaan dugsiga dayrta iyagoo diyaar u ah inay heer sare gaaraan.
Goobta: Maxfield Elementary, 380 Victoria St N., Saint Paul
Saacadaha: 8:45 subax-3: 45 pm
Barnaamijka American Indian ee Fasallada 1-5
Kaqeybgalinta Dhalinyarada Dhaqanka & Bey'adda Dabiiciga ah
Ardayda Hindida Mareykanka iyo kuwa aan aheyn Hindida Mareykanka waxay seddex toddobaad ku qaataan Dayton's Bluff Achievement Plus barashada dhaqanka Hindida Mareykanka ah, iyo hal toddobaad oo ay Belwin Conservancy ku bartaan isku xirnaanta dhaqameed ee xayawaanka Minnesota iyo degaankooda. Barnaamijkan waxaa la dejiyay iyadoo lala kaashanayo waaxda Department of Indian Work.
Taariikhda Barnaamijka: June 21-July 16 (ma jiro barnaamij Isniinta, July 5)
Goobta: Dayton's Bluff Elementary, 262 Bates Ave., Saint Paul
Barnaamijka Children’s Defense Fund (CDF) Freedom Schools ee Fasallada K-8
"Waxaan beddeli karaa: Naftayda, Qoyskayga, Bulshadeyda, Dalkayga iyo Adduunyadayda anigoo kaashanayo Rajo, Tacliin iyo Ficil!"
Iskoollada Freedom Schools waxay xoojinayaan xirfadaha akhris-qorista iyadoo loo marayo manhaj akhris oo isku-dhafan oo cilmi-baaris ku saleysan oo ay ku jiraan buugaag, agabyo iyo mashruucyo matalaya hiddaha iyo waaya-aragnimada ardaydeenna. Waxyaabaha aasaasiga ah waxaa ka mid ah Hero Elementary K-2; sayniska, farsamada, injineernimada, farshaxanka iyo barashada xisaabta; munaasabado waalidka iyo qoyska lagu xoojinayo; la shaqeynta bulshada; dhabbaha loo maro shaqooyinka xirfadda leh; caafimaadka iyo fayo-qabka; ficil bulsheed; iyo safarro waxbarasho oo gaaban. Ardaydu waxay iska dhex arkaan hogaamiyayaasheenna waxbarasho ee tayada sare leh (Servant Leader Educators) iyo lataliyeyaasha hogaamiyaha bulshada/ee mudan ku dayashada.
Taariikhda Barnaamijka: June 21-July 30 (ma jiro barnaamij Isniinta, July 5)
Capitol Hill Gifted and Talented, 560 Concordia Ave., Saint Paul - Aagga D, E, F
Hazel Park Preparatory Academy, 1140 White Bear Ave., Saint Paul - Aagga A, B, C
Saacadaha: 8:30 subax-3:45 pm
Barnaamijyada Waxbarashada Xagaaga ee Fasallada 5-8
Fasallada 5-8 iyo Xilliga Xagaaga
Ardaydu waxay helaan taageero tacliimeed, waxay horumariyaan xirfadaha hoggaaminta, waxayna ku ogaadaan hibooyin cusub iyo xiisahooda iyagoo qabanayo waxqabadyo kobcin leh. Ardayda dhigata fasalka 5-aad waxay bartaan xirfado ay ugu diyaar garoobaan u gudubka dugsiga dhexe. Ardayda dhigato fasallada 6-8 waxay doortaan koorsooyin ay jecel yihiin si kor loogu qaado waxbarashadooda xagaaga. Koorsooyinka leh kobcinta oo ay ardaydu jeclaan karto waxaa ka mid ah: beeraha, farshaxanka/nashqadeynta, juqraafiga deegaanka, sawir dhijitaal ah/soosaarka fiidiyowga, kombiyuutarka, xulashooyinka muusikada ee kala duwan (kooxo iyo qalabka muusikada, gitaarka/ukulele, biyaano/kumbuyuutar, koox isla tunto qalabka, durbaanno), tiyaatar, aalado iyo waxbarashada jimicsiga.
Murray Middle School (Fasallada 5 & 6), 2200 Buford Ave., Saint Paul
Highland Park Senior (Fasallada 7 & 8), 1015 S. Snelling Ave., Saint Paul
Saacadaha: 7:30 subaxnimo -1:30 pm
Barnaamijka STEM (Science, Technology, Engineering, Math) ee Fasallada 5-8
Sahaminta Fursado Cusub
Ardaydu waxay la kulmaan waxqabadyo tacliineed oo gacan-qabasho ah iyo safarro waxbarasho oo gaaban iyadoo diiradda la saarayo sayniska, tikniyoolajiyadda, injineernimada iyo xisaabta (STEM). Fasallada iyo waxqabadyada waxaa ka mid ah injineernimada, kombiyuutarrada, dhismaha, isboortiga, barashada deegaanka, wax karinta, iyo la shaqeynta kombiyuutarada. Waxaa barnaamijkaan kafaalaqaaday 3M.
Goobta: E-STEM Middle School, 600 Weir Drive, Woodbury
Barnaamijka Future Leaders and Sports ee Fasallada 5-11
Waxbarashada ardaydu waxay diiradda saareysaa xisaabta, suugaanta luuqadda, sayniska iyo hoggaaminta. Waxqabadyadu waxaa ka mid ah ciyaaraha fudud ee maalinlaha ah iyo xoojinta kuleejka iyo u diyaarsanaanta shaqada, oo ay ku jiraan safarrada waxbarasho oo gaabaan ee lagu booqanayo kuleejyada. Mawduucyada caddaaladda bulshada iyo dhaqan celinta waxay dhisaan xirfado ah dhanka hoggaamiyennimo iyo shucuur bulsheed.
Taariikhda Barnaamijka: June 21-July 15 (ma jiro barnaamij Isniinta, July 5)
Saacadaha: 8:30 subaxnimo -1:30 pm
Iskoollada Freedom Schools waxay xoojinayaan xirfadaha akhris-qorista iyadoo loo marayo manhaj akhris oo isku-dhafan oo cilmi-baaris ku saleysan oo ay ku jiraan buugaag, agabyo iyo mashruucyo matalaya hiddaha iyo waaya-aragnimada ardaydeenna. Waxyaabaha aasaasiga ah waxaa ka mid ah Hero Elementary K-2; sayniska, farsamada, injineernimada, farshaxanka, iyo barashada xisaabta; munaasabado waalidka iyo qoyska lagu xoojinayo; wax ka qabashada bulshada; dhabbaha loo maro shaqooyinka xirfadda leh; caafimaadka iyo fayo-qabka; ficil bulsheed; iyo safarro waxbarasho oo gaaban. Ardaydu waxay iska dhex arkaan hogaamiyayaasheenna waxbarasho ee tayada sare leh (servant leader educators) iyo lataliyeyaasha hogaamiyaha bulshada/ee mudan ku dayashada.
Barnaamijyada Waxbarashada Xagaaga ee Fasallada 9-12
Ardayda dhigata fasallada 9-12 waxay saarnaan karaan waddada qalin jabinta iyagoo u marayo inay soo kabaan dhibcaha inta lagu jiro. Xilliga Xagaaga ee 1 iyo/ama Xilliga Xagaaga ee 2. Si loo diiwaangeliyo, ardaydu waa inay la kulmaan la-taliyahooda dugsiga.
Tilmaamaha Caafimaadka iyo Bedqabka ee COVID
Dhammaan Barnaamijyada Waxbarashada Xagaaga waxay yeelan doonaan celcelis ahaan 20 arday koox kasta oo ka tirsan fasallada K-8. Qoysasku waa inay iska bartaan SPPS COVID-19 Tilmaamaha Ardayda iyo Qoyska, taasoo si joogto ah loo cusbooneysiiyo iyadoo la raacayo talooyinka waaxda caafimaadka bulshada. Waqtigaan, tilmaamahan waxaa ka mid ah in wejiga la daboolo oo qasab ku ah ardayda iyo shaqaalaha, tilmaamaha cusub ee COVID 19 ee ka soo baxay gobolka ayaa sheegaya in booqdayaal "xaddidan" (oo ay ku jiraan xubnaha qoyska) loo oggol yahay dhismayaasha, gacmo dhaqid joogto ah iyo nadaafadda, iyo kala fogaanshaha bulshada ilaa intii suurtagal ah .
Haddii arday ama xubin ka tirsan qoyskooda ay isku arkaan calaamadaha COVID-19 ama laga helay, waa inay guriga joogaan oo ay warbixin u gudbiyaan Nidaamka Warbixinta ee SPPS COVID-19 isla maalintaas.
Haddii aynaan awoodi karin inaan qabanno barnaamijyada K-8 sababo la xiriira COVID-19, dhammaan iskoollada la isku qoray waa la baajinayaa oo fursado kale oo waxbarasho ayaa la bixin doonaa.